Ryzen53600 အတွက်အကောင်းဆုံး Motherboard - ဝယ်ယူမှုလမ်းညွှန် (၂၀၂၀) - Pc
Ryzen53600 အတွက်အကောင်းဆုံး Motherboard - ဝယ်ယူမှုလမ်းညွှန် (၂၀၂၀)
PUBG မှ update 9.1 ကိုစတင်ပြီးလူတိုင်းအတွက်ပြုလုပ်နေသည်။အလားတူပဲ၊ နောက်မျိုးဆက် Call of Duty ကိုသင်ကစားနေတယ်ဆိုလျှင်အနည်းဆုံး AMD Ryzen R5 1600X နှင့်အထက်မော်ဒယ်များကိုလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အားတစ်စက္ကန့်လိုအပ်သော frames များကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Ryzen53600 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စဉ်းစားနေပါကအထောက်အကူပြု Motherboard သည်အရေးပါသည်။
သဟဇာတဖြစ်သော motherboard သည်သင့်အားဂရပ်ဖစ်၊ RAM နှင့် HDD တို့တွင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့ဖြင့်သင်သည် Modern Warfare ကိုကစားနိုင်ရုံသာမကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများစွာကိုလည်းကစားနိုင်လိမ့်မည်။
Motherboard ၀ ယ်သည့်လမ်းညွှန်များထပ်မံ
အကောင်းဆုံး X570 Motherboards
အကောင်းဆုံး Z390 Motherboards
AMD Ryzen5အတွက်အကောင်းဆုံး motherboard ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
Motherboard များတွင်ပြင်ပဂရပ်ဖစ်ကဒ်များနှင့်တွဲဖက်သည့်အခွင့်အလမ်းများပါရှိသော်လည်း၎င်းတွင် internal card ရှိသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် AMD, Radeon ဂရပ်ဖစ်ကိုစဉ်းစားနေပါကသင်ရွေးချယ်လိုက်သောစက်သည်သင်၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ နာရီနှင့်အမြန်နှုန်းကဲ့သို့သောရွေးစရာများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်လိုက်ဖက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သည်။
၂။ Form Factor
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့သင်ရွေးချယ်လိုက်သောမည်သည့် Motherboard ၏ပုံစံကိုမဆိုဖြစ်သည်။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံလာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏အစိုးရအဖွဲ့၏အရွယ်အစားနှင့်နေရာကိုတိုင်းတာရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ motherboard သည်အလွန်နည်းနေပါက၎င်းသည်ကက်ဘိနက်အတွင်းသို့မ ၀ င်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်အရွယ်အစားသည် eATX အမျိုးအစား motherboards များထက်မသေးကြောင်းသေချာစေပါလိမ့်မည်။
၃။ PCI အထိုင်များ
လူအနည်းငယ်သာ PCI Slots များကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဟုမှတ်ယူကြသည်။ သင်သည်မည်သည့် motherboard ကို ၀ ယ်ပါကနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ RAM (သို့) ချဲ့ထားသောကဒ်များကဲ့သို့သော hardware အချို့ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းသည်တူညီသောအရေးကြီးသည်။ PCI slot များများများများစားစားထားရှိခြင်းဖြင့်သင်၏ကက်ဘိနက်အတွင်း၌ hardware အစိတ်အပိုင်းများကိုနေရာချရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတွင်အနည်းဆုံး full-speed PCI ကဒ်အထိုင်တစ်ခုရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ။
4. Socket အမျိုးအစား
PCI slot တစ်ခုကဲ့သို့မည်သည့် motherboard ၏ socket ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်ကိုနောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Motherboard တစ်ခုကိုရွေးချယ်နေစဉ် Socket ၏မှန်ကန်သောအမျိုးအစားကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ CPU နှင့်ကိုက်ညီသော socket တစ်ခုရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ Motherboard နှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏ Motherboard ကို ၀ ယ်ရန်သင်မသွားမီ socket အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာပါစေ။ ယေဘုယျအားဖြင့် AM4 Socket များသည်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
5.Motherboard တိုးချဲ့ Options ကို
နောက်ထပ်တိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အချက်တစ်ချက်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင် Motherboard ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ကဆက်လက်သုံးပါမသာလိမ့်မယ်။ သငျသညျဂရပ်ဖစ်နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်သောဟာ့ဒ်ဝဲ extension များများစွာထည့်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့ချဲ့ထွင်ရန်အတွက်နေရာလွတ်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ Standard4PCIe slot များပါသည့် motherboard ကိုရယူခြင်းသည်ကြီးမားသောအဆင့်မြှင့်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Ryzen53600 အတွက်အကောင်းဆုံး Motherboard:
၁။ Asus ROG Strix B450-F Gaming Motherboard
Asus သည်စိတ်ချရသော Motherboard များကိုအမြဲတမ်းထုတ်လုပ်လေ့ရှိပြီး B450-F သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ဟာ Ryzen ပရိုဆက်ဆာတွေရဲ့မျိုးဆက်အားလုံးအတွက်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များနှင့်အဆင့်မြင့်ဂိမ်းများကိုကစားရန်ဆန္ဒရှိပါက၎င်းသည်ရွေးချယ်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
dual M.2 နှင့် USB 3.1 တို့ကဲ့သို့စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာများသည်ဤထုတ်ကုန်နှင့်သင်နှစ်သက်ချင်သောအရာဖြစ်သည်။ dual M.2 နှင့် Gen2Type-A ချိတ်ဆက်မှုနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းကသင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဒီ Motherboard ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်ပြီး ၀ ယ်သူအများစုက CS: GO နှင့် PUBG တို့ရဲ့ပြသနာကိုသဘောကျကြသည်။ သင်သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုသင်၏ပုံမှန်အသုံးပြုရန်လိုလိမ့်မည်။
AMD B450 Chipset သည်ဤထုတ်ကုန်ဖြင့်သင်ရရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ပရိုဆက်ဆာအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဟာဆိုက်ဘာအလားအလာနဲ့အတူ ROG I / O shields ကိုချောမွေ့ပြောင်လက်နေတဲ့အနက်ရောင်ပြီးအောင်လုပ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရတာအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့မည်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားမဆိုငါ့အစ်ကိုကဲ့သို့ဤနှင့်အတူကစားရန်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ASUS B450-F ကိုကျွန်ုပ်၏ PC တွင်ညအချိန်တွင်အလွန်အံ့အားသင့်စေနိုင်သောကြောင့်သိမ်းဆည်းထားလိုသည်။ Fan Xpert4နှင့် DC ပန်ကာများကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအအေးခန်းရွေးချယ်မှုများကိုပင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတွင်ရေအေးတပ်ဆင်မှုကိုတားဆီးနိုင်သောသီးခြား PWM / DC ခေါင်းစီးပါရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မှောင်မိုက်တဲ့အခန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဗီရိုတစ်လုံးနဲ့တောင်လူတိုင်းကဖန်စီထားတဲ့ Motherboard တစ်ခုပါ။
၀ ယ်သူတွေကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုငွေအလွန်တန်ဖိုးကြီးစွာရှာကြပါတယ်။ ၀ ယ်သူများအတွက်ဒီ Motherboard ကိုရွေးချယ်ရန်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာဤထုတ်ကုန်မှပေးသောအပြိုင်အဆိုင်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာဆိုက်ဘာအလားအလာဖြစ်သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ Asus ROG Strix B450-F Gaming Motherboard သည်အိတ်ကပ်နှင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤသည် Motherboard သည်ပုံမှန်ပရိုဆက်ဆာများနှင့် ၄ င်းတို့ကိုထောက်ပံ့သည့် Motherboard များထက်အဆင့်မြှင့်တင်လိုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဒီအထူးသဖြင့်စက်ပစ္စည်းသည်အခြားသူများကိုကျော်လွှားလိမ့်မည်
သငျသညျ AMD စတိုး MI ထောက်ခံမှုရနိုင်သည်
ဒီထုတ်ကုန်မှာ wifi module မရှိဘူး
သင်သည် BIOS ၏ကြီးလေးသောစောင့်ကြည့်မှုအနည်းငယ်ခံရနိုင်သည်
Gigabyte X570 သည် AMD Ryzen5ပရိုဆက်ဆာအတွက်အကောင်းဆုံး motherboards ကဏ္inတွင်နာမည်ကြီးသည်။ Q-Flash plus feature ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းသည်လွယ်လွယ်ကူကူ bios updates များကိုရရှိသည်။ bios file ကို install လုပ်ရန်လုံလောက်သောကြောင့်သင်ပင် CPU နှင့် memory ကို set up ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေမည့်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာများစွာကိုဖမ်းယူထားသည်။
လုံခြုံရေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဤထုတ်ကုန်တွင် I / O ဒိုင်းလွှားပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်လေးလံသောသတ္တုကိုယ်ထည်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ရှိအကာအကွယ်ပစ္စည်းများနှင့်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောကိုယ်ထည်ဖြင့်တန်းစီထားသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ ဒီ Motherboard အတွက်လုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအဆင်မပြေသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လျင်မြန်စွာ setup options များရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
Gigabyte X570 သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော 12 +2 စွမ်းအင်ဒီဇိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်နှစ်ဖက်လုံးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ digital PWM Controller များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးသင့်အားကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုရနိုင်သည်။ ဒီဒစ်ဂျစ်တယ် controller ကိုသင်မယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျမှုနှင့်အတူပေးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်၎င်းသည်သင့်အားအစိတ်အပိုင်းများကိုပါဝါပို့ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် X750 ၏တုန့်ပြန်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။
နောက်ထပ်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုမှာ DDR4 XMP အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ဤစက်သည် 4000 MHZ တွင်အလွယ်တကူနာရီနိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန် Gigabyte သည်သူ၏ထုတ်ကုန်နှင့် XM cable ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကို M.2 SSD ကိရိယာနှစ်ခုဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်အပူအစောင့်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည့်တစ်ခုလုံးကိုအေးမြစေသည်။
၀ ယ်သူများသည် Gigabyte X570 AORUS Elite Motherboard ကိုနှစ်သက်ကြပြီး၎င်းသည်အလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့အများစုသည် x570 အထောက်အပံ့အနေဖြင့်ဤ Motherboard ကိုရွေးချယ်ရန်ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနဲ့ပါ ၀ င်ပြီးဒီပစ္စည်းထုတ်ပေးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလုံးဝမကိုက်ညီပါဘူး။
Gigabyte ကဒီကိရိယာကိုထိပ်တန်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။ ဤပစ္စည်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများအားလုံးကိုအအေးခံရန်ကူညီပေးသော VRM heatsink ပါရှိသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အရည်အေးများကိုတပ်ဆင်ရန်ဆိပ်ကမ်းများစွာရှိသည်။
ဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူ M.2 heatsink နှင့်အတူပါရှိသည်
ဘက်ပေါင်းစုံ I / O ဒိုင်းလွှားကိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီထုတ်ကုန်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ် VRM အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါရှိသည်
လွယ်ကူစွာရရှိရန် Q-Flash Plus ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
Main board တွင် 24 Pin ပါဝါ connector ရှိသည်
Type-C port မရှိပါ
၃။ Asus Prime B450M-A စီးပွားဖြစ် Motherboard
Asus Prime B450M-A ကိုလူအများစုကပရော်ဖက်ရှင်နယ် motherboard အဖြစ်အသုံးပြုကြပြီးဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးမှန်ကန်ကြသည်။ ချိတ်ဆက်နေစဉ်ဤ Motherboard သည် 3rd မျိုးဆက် Ryzen ပရိုဆက်ဆာများနှင့်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ပြောင်းလဲလိုပါက bios menu ကိုကိုယ်တိုင် update လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဤစက်သည်ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိသည်။ LAN ကို 1GB ထည့်သွင်းနိုင်သည့်အတွက် LAN ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Configure လုပ်လို့ရအောင် D-sub အပြင် DVI display နဲ့လူအတော်များများ configure လုပ်ခဲ့တာကိုငါတွေ့ခဲ့ရတယ်။ HDMI 2.0 input တစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင်၏ Xbox သို့မဟုတ် PS5 ကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုကိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သည့်အံ့အားသင့်ဖွယ် DDR4 ram လိုက်ဖက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတွင် RAM slot ၆ ခုရှိသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ RAM drives များကိုကိုယ်တိုင် configure လုပ်၍ ဆက်လက်ထည့်နိုင်သည်။ chipset ကို AMD B450 မော်ဒယ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးအအေးခန်းတွင်နေရာကောင်းသည်။
ဒီ motherboard ကိုအားသွင်းဖို့ lithium-ion batteries တွေလိုအပ်တယ်။ RGB connector များမပါရှိသော်လည်းဤ motherboard ကိုပွင့်လင်းမြင်သာသောကက်ဘိနက်တစ်ခုဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလေးချိန်အလွန်ပေါ့ပါးသောကြောင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ခက်ခဲသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။
၀ ယ်သူများကဤကုန်ပစ္စည်းကိုသဘာဝတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်များစွာသောလူတို့နှစ်သက်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်အချို့သောသူများသည်စားသုံးသူများ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်စိတ်ပျက်မိကြသည်။ ဒီ Motherboard အတွက်အစားထိုးအချိန်နှစ်ပါတ်အထိကြာလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ဘတ်ဂျက်နှင့်မည်သည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားပါက Asus Prime B450M-A ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်အံ့သြစရာကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ASUS motherboards များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရနိုင်သည်။ Asus Prime B450M-A ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Motherboard တွင်နေရာလွတ်ရှိပြီးလျောက်ပတ်သောကိုယ်ထည်ဖြင့်လည်းပါရှိသည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းဤ motherboard မှပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်သည်လူတိုင်းအတွက်အားရစရာဖြစ်သည်။ မည်သည့်အပျော်တမ်းကစားသမားမဆိုသူတို့၏ motherboard ကို AMD Ryzen53600 ဖြင့်ပြင်ဆင်လိုသည်။
ဒါဟာမျိုးဆက်အားလုံး AMD မော်ဒယ်များနှင့်အတူအကြီးအသွားသည်
သငျသညျဘက်စုံ LAN ကိုယ်ရံတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုရနိုင်သည်
၎င်းသည် i / o ဒိုင်းလွှားကာကွယ်မှုအတွက်သင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုရှိသည်
ဒီထုတ်ကုန်တွင် DRAM overcurrent protection ပါဝင်တယ်
ASRock B450M Motherboard တွင်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းမွန်သောထုပ်ပိုးမှုများပါဝင်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှသတ္တုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြင့်အကာအကွယ်ပေးထားပြီး I / O shield ၏အလုံးစုံအရည်အသွေးမှာလည်းကောင်းမွန်သည်။ ဤကုန်ပစ္စည်းအားသဘာဝတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ထားသော port တံဆိပ်များရှိသည်။ ASRock မှအခြား motherboards အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Pro4 သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အသံသို့လာသောအခါဤကိရိယာသည် Realtek ALC892 တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည် audio hardware အများစုအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောမောင်းနှင်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အား 3uA ယိုစိမ့်မှုအဆင့်တွင်သတ်မှတ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ သင်အသံလှိုင်းလိုအပ်ချက်များအတွက် ၇.၁ ချန်နယ်များကိုသုံးနိုင်သည့်ဆူညံသံအဆင့်များကိုရိုးရိုးထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ optical output ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လွယ်ကူတဲ့ရလဒ်တွေအတွက် HDMI port ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard အတွက် Bios setup အသုံးပြုရန်လျောက်ပတ်သောကြောင့်ထုတ်ကုန်ကိုအပြည့်အဝ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်ရွေးချယ်ခြင်းများနှင့် overclocking natures များအပါအဝင်အရာအားလုံးနှင့်သင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကသင့်အားထိန်းချုပ်သောအဆင့်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ညှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်ပင်လက်ဖြင့်ဘက်လိုက်မှု update လုပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီထုတ်ကုန်ကိုစမ်းသပ်နေချိန်မှာ overclocking results နိမ့်ကျတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါလည်ပတ်နေစဉ် 1V ဝန်းကျင်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ရလဒ်များကိုကအောင်မြင်မှုမှကြွလာသောအခါအသုံးပြုရန်အမှန်ခြွင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် ၁.၄၃ ဗို့အားဖြင့် 4.2GHz တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်းကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ motherboards အများအပြားထိပ်ဆုံးမှမလာကြဘူး။
၀ ယ်သူတော်တော်များများကဒီထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ လူအများစုကဒီထုတ်ကုန်ကို ASRock ကစိတ်ကူးထားတဲ့ motherboard တစ်ခုလိုနှစ်သက်သည်။ M.2 သိုလှောင်မှုနှင့်အံ့သြဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုဖြစ်ပုံရသည်။ ဒါ့အပြင် ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard က RGB Strip တစ်ခုလုံးကိုကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာတင်ပေးပါတယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်လျောက်ပတ်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
စျေးနှုန်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုက်ညီပါက ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard ကိုအသုံးပြုခြင်းထက်ဘာမှပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်နှင့်ပရိုဆက်ဆာအထောက်အပံ့ဖြင့်ရိုးရှင်းစေသည်။ မည်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းနှစ်သက်သူမဆိုဤပစ္စည်းကိုသူတို့၏အိမ်တွင်ထားလိုသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့် overclocking protection တို့ပါ ၀ င်သည်
၎င်းတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်တီထွင်ထားသော RGB strips များရှိသည်
၎င်းသည် Gaming grade audio နှင့်ပါ ၀ င်သည်
အဆိုပါထုတ်ကုန်လျောက်ပတ်သော M.2 သိုလှောင်မှုရလဒ်များနှင့်တကွကြွလာ
၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်အတွက်သင့်လျော်သော PCIEx16 ကိုထောက်ပံ့သည်
၅။ MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard
MSI သည်ဂိမ်း motherboards များစွာကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အသုံးအနှုန်းအားလုံးတွင်အထူးဖြစ်သည်။ MSI Mini-ITX သည်ထုတ်လုပ်သူမှပြည့်စုံသော software အစုံများနှင့်အတူပါရှိသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားဘက်လိုက်မှုများတပ်ဆင်ပြီးဤဘုတ်အဖွဲ့ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးယာဉ်မောင်းများထက် software suite ရှိခြင်းသည်အမြဲတမ်းပိုကြီးမားသောအားသာချက်ဖြစ်သည်။ သငျသညျပြည့်စုံအလုပ်လုပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရနိုင်သည်။
On-board အသံသည်လှုပ်ရှားမှုရှိသောအသံအရည်အသွေးရှိသောရိုးရှင်းသောယန္တရားတစ်ခုကိုရနိုင်သည်။ ဂျပန်မှာအသံချဲ့စက်တပ်ဆင်ထားပြီးဒီစက်ကိုသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမှာပါ။ MSB motherboards အများစုသည် PCB ၏နှစ်ဖက်စလုံးမှပြင်ပအသံထုတ်လွှင့်ချက်များကိုပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဤဘုံအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်နောက်ခံအဆင့်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့်ပိုမိုသန့်ရှင်းသောစတီရီယိုခွဲခြာမှုကိုပေးသည်။
Mini-ITX ၏မှတ်ဉာဏ်အထောက်အပံ့သည်ဤထုတ်ကုန်၏အပြောဆုံးအကြောင်းအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 64 GB DDR4 RAM Memory ပါ ၀ င်သော DIMM slot နှစ်ခုတပ်ဆင်ထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါ့အပြင် ၃.၀ × ၁၆ PCIe အထောက်အပံ့တစ်ခုလည်းရနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအားပိုမိုကောင်းမွန်သောသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာများကိုဖန်တီးပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ချိန်ညှိချက်များနှင့်အတူ motherboard များစွာမပါရှိပါ။
VRM အအေးနှင့် overclocking ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များကဤထုတ်ကုန်ကိုကောင်းစွာအံ့အားသင့်စေသည်။ ပတ်ပတ်လည်မှာထောင့်တွေအများကြီးမများပေမယ့်6+2အဆင့် VRM ပြင်ဆင်မှုကိုသေချာပေါက်ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နေလျှင်ပင်သင်၏ CPU ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အေးမြသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန် MSI သည် IR3555 PoweR အဆင့်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းမှာ high-end motherboards များတွင်အထူးသဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
၀ ယ်သူအများစုကဤကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အချက်တစ်ခုမှာ ၄ င်း၏ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားပြီးစျေးနှုန်းသက်သာသည်။ ဒီထုတ်ကုန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့စျေးနှုန်းဟာအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard ကိုအခြားသူများထက်ကျော်လွန်အောင်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သူငယ်ချင်း၏ pc ၌ဤ motherboard ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြိုးစားပြီးလေ့လာခဲ့ပြီး GTA Vice City ကစားနေစဉ်အလွန်ကောင်းမွန်နေပုံရသည်။
သင့်အနေဖြင့်သင့်အားအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်နိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုလိုချင်လျှင် MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard သည်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပရီမီယံအထောက်အပံ့အတွက်တံဆိပ်ကပ်စတစ်ကာများနှင့် WiFi အင်တင်နာများပါရှိသည်။ သင်၏ပုံမှန်ရလဒ်များအတွက်ဤထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုလိုသည်။
၎င်းတွင် built-in WiFi AC နှင့် Bluetooth အထောက်အပံ့များပါရှိသည်
ဤထုတ်ကုန်တွင် B450 chipset သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်
သငျသညျရိုးရိုး setup ကိုနှင့် configuration ကိုမိနစ်၌ပြစ်မှားမိနိုင်ပါတယ်
MSI command စင်တာမှအထောက်အပံ့သည်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်ပါသည်
စျေးနှုန်းဒီ Motherboard ၏အတော်လေးမြင့်မားသည်
ဤထုတ်ကုန်တွင်စာပို့သင်္ကေတ LD မရှိပါ
၆။ Asus AM4 TUF Gaming X570 Motherboard
Asus AM4 ကိုမူလကအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်ဒယ်တစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီ Motherboard အတွက်စျေးနှုန်းကအနည်းငယ်မြင့်တက်ပေမဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့သင်ရရှိတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကအပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးမော်ဒယ်တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ကျစေတယ်။ သင်သည်မည်သည့် Ryzen 3000 မော်ဒယ်ကိုသုံးနေပါကသင်သွားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ရမည်။ တိုးမြှင့်ထားသော WiFi နှင့် Bluetooth option သည်၎င်းကိုရွေးချယ်ရန်သင့်လျော်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ဤကိရိယာသည်အလွန်အကြမ်းခံ။ အသုံးပြုရန်တည်ငြိမ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ဖက်စလုံးမှအကာအကွယ်ပေးသော I / O သတ္တုကိုယ်ထည်တစ်ခုထဲတွင်ပါ ၀ င်သည်။ AMD ပလက်ဖောင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအားလုံးသည်ဂိမ်းအတွက်အဆင်သင့်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပါလာသည် သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာဤထုတ်ကုန်ကိုရိုးရှင်းစွာတပ်ဆင်ပြီးချက်ချင်းစတင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ, ဒီထုတ်ကုန်အားလုံးတည်ငြိမ်ခန္ဓာကိုယ်အဘို့ပတ်ပတ်လည်စစ်ရေးတန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုရှိပါတယ်။
ဒီအံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်၏စွမ်းအင်ဒီဇိုင်းကိုလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 12 +2ပါဝါအဆင့်များ၏အကူအညီဖြင့် VRM ကိုအဆင့်မြင့်ခဲ့သည်။ သင်ဤအရာအားလုံးကိုအထုပ်တစ်ခုတည်းတွင်ရရှိရန်ကူညီသည့်မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်ဘက် MOSFET ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဆက်ဆာများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုလည်းဖော်ပြသည်။ ဒေါက်တာမိုရဲ့ပါဝါအဆင့်ဆင့်၏ရှေ့မှောက်တွင်အများကြီးပိုကောင်းပါဝါ၏အသုံးချသတ်မှတ်ပါတယ်။
VRM ရှိနေခြင်းနှင့်အတူ Asus AM4 သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ထက်မဆိုပိုမိုအေးစက်နေသည်။ ၎င်းသည် PCH နှင့် VRM ကိုရည်စူးထားသောတက်ကြွသော heatsink တစ်ခုပါရှိသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များကြောင့်သင်ဂိမ်းကစားနေစဉ် high-end hardware configurations အားလုံးကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သငျသညျအရည်နှင့်ပန်ကာအေးနှစ်ခုလုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်သည်။
Asus AM4 TUF Gaming X570 Motherboard ကို ၀ ယ်ယူသောသုံးစွဲသူတိုင်းသည်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းကိုချက်ချင်းနှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ရန်လျင်မြန်သောလျောက်ပတ်သောဟာ့ဒ်ဝဲဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူပါရှိသည်။ ၎င်းသည်အသစ်ဖြန့်ချိသောကြောင့်သင်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုစောင့်ရန်လည်းမလိုအပ်ပါ။
Asus AM4 TUF Gaming X570 Motherboard သည်အဆင့်မြင့်ဂိမ်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဤထုတ်ကုန်၏သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးမြန်ဆန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Overclocking ပြissuesနာများလည်းအများကြီးနိမ့်အဆင့်အထိလျှော့ချနေကြသည်။
စျေးနှုန်းဒီ Motherboard က၏အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်သည်
Asus AM4 တွင် UEFI ၏အထောက်အပံ့နှင့်ပါ ၀ င်သည်
၎င်းတွင် chipset ကိုအအေးပေးစနစ်ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်
2.5 Gb LAN ကိုသင်ရနိုင်သည်
၎င်းသည် Ryzen53000 CPU နှင့်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်
ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့် PCIex1 port မရှိပါ
မည်သည့် USB 3.1 slot မရရှိနိုင်ပါ
Ryzen53600 ဆိုတာဘာလဲ။
AMD Ryzen53600 သည်အခြေခံအားဖြင့် AMD မှစတင်မိတ်ဆက်သည့်ခြောက်ခု core ပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည်။ ဂိမ်းလောကရှိလူတိုင်းနီးပါးသည်ဤပရိုဆက်ဆာအကြောင်းသိသိသာသာမြင့်မားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တက်နိုင်သည့်ဝန်စွမ်းရည်များကြောင့်သိသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြောရရင်ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်သည် AM4 ပရိုဆက်ဆာ ၁၂ လုံးပါဝင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Zen2ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သီးသန့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြှင့်မှုများပါရှိသောမည်သည့် Ryzen ပရိုဆက်ဆာမဆိုသင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကစားနေစဉ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။
AM4 motherboards များသည်ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်နာမည်ကောင်းရှိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်ဒီပရိုဆက်ဆာမှာအပိုအင်္ဂါရပ်တွေလိုအပ်တယ်။ ထို့ကြောင့်ဂိမ်းကစားသူများသည်ဤထုတ်ကုန်နှင့်အဆင်ပြေစွာလိုက်ဖက်မည့်လိုက်ဖက်သည့် Motherboard ကိုရှာဖွေကြသည်။ AMD Ryzen53600 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းသည် clock speed 3.6 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် 4.2GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
dual-channel DDR4 RAM ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်၎င်း motherboards များနှင့်တွဲဖက်ခြင်းကသင့်အားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် GPU နှင့် CPU နှစ်ခုလုံးအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် Motherboard ကိုဝယ်ယူရန်မျှော်လင့်သင့်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာကြီးမားတဲ့ဂိမ်းလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရမှာပါ။
၎င်းသည် 65W ဒီဇိုင်းပါဝါနှင့်အတူပါ ၀ င်သောကိုယ်ပျောက်အေးစက်ပါဝင်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပရိုဆက်ဆာကအပူဖြစ်လာမှာကိုဖော်ပြတယ်။
Ryzen53600 က i5 ထက်ပိုကောင်းသလား။
Ryzen5နှင့် Core i5 နှစ်ခုစလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါလည်ပင်းမှလည်ပင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် AMD သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်အနည်းငယ်ရှေ့သို့ရောက်နေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် Intel မှပရိုဆက်ဆာများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့် heatsink ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Ryzen5မှာ heatsink နည်းနည်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် core i5 ကအများကြီးနိမ့်တယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်၊ နာရီ - မြန်နှုန်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များစသည့်အခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်တူညီသည်။ သူတို့နှစ်ခုစလုံးအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း Ryzen5၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအခြားသူများထက်အနည်းငယ်သာလွန်သည်။ Intel ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်နည်းနည်းနိမ့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကိုလုံး ၀ မသက်ရောက်ပါ။
Ryzen53600 ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ရေပန်းစားတာလဲ။
Ryzen5တွင် Intel Core i5 နှင့် AMD မှနိမ့်ဆုံးမော်ဒယ်များတွင်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သငျသညျစျေးနှုန်းအချက်မှတဆင့်သွားပြီကြောင့် Ryzen5ဤအမှု၌စံနမူနာဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
မျှမျှတတဖြစ်စေရန်၊ မည်သည့် high-end ပရိုဆက်ဆာမဆိုသယ်ဆောင်မည့်အထူးအင်္ဂါရပ်အားလုံးနှင့်အတူပါရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဒီအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့ Motherboard တစ်ခုလိုအပ်တယ်။ bios setup မပါရှိပါက Ryzen5ဖြင့်သင်၏ motherboard အဟောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုမည်သည့်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်မဆိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းထားသောစျေးသည်အလွန်သင့်လျော်သည်။
Ryzen5အတွက် BIOS ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။
တိုင်းအဆင့်မြှင့်မှုတိုင်းသည်ယာဉ်မောင်းအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် bios update ကိုမရွေးချယ်ပါက hardware drivers များသည်အထောက်အပံ့ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသေးစားဂရပ်ဖစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်နားလည်နိုင်ပါသည်။ Motherboard တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်သင့်အား bios setup ကိုလုံးဝအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငါကြိုးစားပြီးသော်လည်း Gigabyte X570 ကဲ့သို့သောအချို့သော Motherboard များသည်ဒီအလုပ်ကိုအလိုအလျောက်လုပ်လိမ့်မည်။
Ryzen5အတွက်ပန်ကာဘယ်ခေါင်းစီးဘယ်လောက်လိုပါသလဲ။
ယခုသင်လုပ်မည့်အလုပ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဤပရိုဆက်ဆာအားအဆင့်မြင့်ဂိမ်းများအတွက်ဝယ်ယူပြီးသည်ဟုယူဆကြပါစို့။ သဟဇာတဖြစ်သော Motherboard တွင်ကောင်းမွန်သော heat sink option ရှိသော်လည်း AMD ပရိုဆက်ဆာများသည်တစ်ခါတစ်ရံအပူလွန်ကဲသည်။ သင်အသုံးပြုရန်အတွက်ပန်ကာခေါင်း5လုံးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အရည်အအေးများအတွက်လေစုပ်စက် connector ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာနေရာလေးကို option ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fortnite က onboard ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နဲ့ run မလား။
မျှမျှတတဖြစ်စေရန်ဤထုတ်ကုန်နှင့်အတူ onboard ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပြားမရှိပါ။ သငျသညျ Fortnite ကစားရန်ဆန္ဒရှိသည့်အခါ, သင်ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကိုအားလုံးပြည့်စုံသောသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ Fortnite ကိုကစားရန်အတွက်သင့်တွင်အနည်းဆုံး AMD Radeon HD 7870 သို့မဟုတ် GeForce GTX 660 သို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်ထားသောမော်ဒယ်များရှိရမည်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဤစိတ်ထဲစောင့်ရှောက်ခြင်း, သင်အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာသွားသေချာအောင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ Ryzen53600 BIOS ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲ။
သင်၏ bios menu ကိုအသစ်ပြောင်းလိုပါကသင်လိုက်နာနိုင်သောကွဲပြားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်။ Gigabyte ကဲ့သို့သောအချို့ motherboards များသည် q-flash menu ကိုအသုံးပြုပြီးသင်ဤဖိုင်ကို download လုပ်ရုံသာမကရရှိနိုင်သည့်အခါတိုင်း updates များကို install လုပ်ရန်သင်၏ pc တွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် manual update တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိပါကမည်သည့် flash drive တွင် bios ကိုမဆို download ပြုလုပ်၍ ၎င်းကို တွဲ၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
x570 က 3600 အတွက် overkill လား?
သင်၏ motherboard တပ်ဆင်ထားသည့်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် Ryzen 3600 နှင့်သာအသုံးပြုပါက၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာကိုမသတ်ပစ်ပါ။ Hardware မှာကွဲပြားတဲ့အဆင့်မြှင့်မှုများရှိလျှင် gpu (သို့) ကျယ်ပြန့်သော RAM ကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်၊ အခြား hardware အစိတ်အပိုင်းများတွင်ချို့ယွင်းမှုရှိပါက၊ ဤ motherboard သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အားနည်းလေ့ရှိသည်။
Ryzen53600 မှာဂရပ်ဖစ်ကဒ်လိုပါသလား။
ဒီတစ်ခုကသင် pc နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ မျှတမှုရှိရန်၊ ဤထုတ်ကုန်သည်မည်သည့်ဂရပ်ဖစ်ကိုမျှထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည့်သို့မဟုတ်မပါပါ။ သင်ရရှိနိုင်သော Graphic output သည်အလွန်နည်းပါးပြီး၎င်းကိုအမြဲထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင် HD ဂိမ်းများသို့မဟုတ်မြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်ရုပ်ထွက်ဗွီဒီယိုများကိုကစားခြင်းကဲ့သို့သောအလုပ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ gpu ကိုဤ Motherboard တွင်တပ်ဆင်ရပေမည်။
ဂိမ်းကစားခြင်းသည် Ryzen5ကိုရွေးချယ်ရန်ကောင်းပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ Ryzen5ကိုရွေးချယ်ရာတွင်အခက်အခဲများစွာ ရှိ၍ ၎င်းသည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ Ryzen5ကိုကြည့်လျှင်၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနာရီအမြန်နှုန်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီပရိုဆက်ဆာနဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံဟာတော်တော်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, AAA ခေါင်းစဉ်ဒီ Motherboard ကဆန့်ကျင်သူတို့ကိုအသုံးပြုဖို့ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားတစ်စက္ကန့်လျှင်အချက်အလက်ကောင်းများရယူရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ရွေးရန် AMD Ryzen53600 ကို Fortnite ကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုကစားလိုသူများသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခ၏ Duty: modern Warfare ကဲ့သို့သောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် GPU, RAM သို့မဟုတ်လျောက်ပတ်သော Motherboard ကဲ့သို့သောလိုက်ဖက်သော hardware ကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လိုက်ဖက်တဲ့ motherboards ကဒီပရိုဆက်ဆာကိုအပူပိုကြီးတဲ့ပမာဏကနေတောင်မှအေးအောင်နေစေတယ်။
သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကစားသောအခါသင်၏ပရိုဆက်ဆာပျက်သွားခြင်းကိုမလိုချင်ပါက AMD Ryzen ၅ အတွက်အကောင်းဆုံး motherboards စာရင်းထဲမှတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်အနှစ်သက်ဆုံးနှင့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Youtube စာရင်းအင်း (၂၀၂၀) - သင်သိသင့်သောအံ့သြဖွယ်ရာအချက်အလက်များ
ရုပ်ရှင်အရှည်ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
xbox တွင် discord ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
iphone x တွင်အက်ပ်များပိတ်ခြင်း
မင်းရဲ့ minecraft skin ကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ
wall-e ရုပ်ရှင်အွန်လိုင်း 123movies